लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीवन हो, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ असार २९ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठ)
२०७८ असार ३०, बुधबार ०८:४४
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ,सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु । नमस्कार !१. सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट हिजो असार २८ गते जारी फैसलाले उत्पन्न गरेको विशिष्ट परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु ।२. प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जेजस्ता फैसला गरिएका छन्, तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछन् ।
लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी ? यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पु¥याए कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा, राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए ? यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ । समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्निपरीक्षा लिँदै जाने छ तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउँछु ।३. नेपालको संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौँ लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो । नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो । संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो । नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो । हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो । फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ ।४. मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महìवपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ।।।निरङ्कुश’ र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने÷बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको÷गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ ।५. नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुनसक्छ । क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त ।।।विजय’ क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ । विगतमा पनि यस्ता विजय–उन्माद हामीले देखेकै हौँ तर कालान्तरमा ती खुसी लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यसबेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले बोलेको थिएँ । त्यसपछिका घटनाक्रम, दुष्परिणाम राजनीतिलाई आफ्नो कोर्षमा जान नदिएर, जनप्रतिनिधि संस्था वा जनतामार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ । हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो ।६. आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महìवपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दल आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुुुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महìवपूर्ण विशेषता हो । दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका घोषणापत्र, दलका काम, दलका आचरण हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, त्यसो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै ह्विप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैनजस्ता कुरा र सांसद दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन । निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ– पछि फर्किने गरी । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । विगतमा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूप देखेका छौँ । जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिमप्रति हो ।७. राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पहिले पनि बसाइसकेकै हो । अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर अझ कहिले कहिले त सन्दर्भ नै नभएका, माग नै नगरिएका विषयसम्म अगाडि बढेर फैसला आउँदा न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ । खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको हो तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ । अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ । अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ । मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु । लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो । हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो । खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुगियो, खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौँ अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका फैसलाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वसनीयतामा ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही हो । हाम्रो चिन्ता संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो । राज्यका विभिन्न अङ्ग, निकाय, संस्थामाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणाम भयावह हुन सक्छन् ।८. अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो भनेर मैले यी प्रश्न उठाएको होइन । सरकारबाट त म आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्यबर्खामा बाहिरिएको हुँ । हो, त्यतिबेला परिवेश भिन्न थियो । मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ– कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभाष उत्पन्न हुन्छ । विरोधाभाष त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहेनछ, जनताको आकाङ्क्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकाङ्क्षाका बीचमा पनि विरोधाभाष पैदा हुने रहेछ ।मैले भनेको थिएँ– यो नै समयको अन्त्य पनि होइन । मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ । तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको साढे एक वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ । आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले (जनताको जनादेश मेरो पक्षमा थियो । परमादेश शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा भयो ।) सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु । सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन । यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ इमानदारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुरालाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु । विकासका निम्ति नयाँ–नयाँ भिजन दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढङ्गले र अभूतपूर्व ढङ्गले अगाडि बढाएको छु । मेरो नेतृत्वमा देशले चौतर्फी ढङ्गले विकास, परिवर्तन र रूपान्तरण अनुभव गरेको छ । जनताले राहत महसुस गरेका छन् । त्यसकारण मलाई आफ्नो नामप्रति खुसी छ । म ढुक्क छु । मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साँध्न या कुनै व्यक्तिका आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रबन्धमाथि जस्तो खेलाची हुँदै छ, त्यसप्रति हो ।आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,आज देश कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, जसरी विश्व पनि गुज्रिरहेको छ । म विगतका विवरणतिर जान चाहन्नँ । कस्ता समस्याको, कस्तो कठिन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा, तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना ग¥यौँ र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौँ, त्यस सम्बन्धमा सिङ्गै देश जानकार छ । मैले अहिले दो¥याइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । अहिलेको मूल प्रश्न भनेको खोपको हो । अब हामी कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौँ र देश खोपयुक्त अवस्थामा सबैलाई पु¥याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढेको छ ।९. खोपको माग र आपूर्तिबीचको ठूलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र ।।।
खोप राष्ट्रवाद’ जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिडविरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ । हामी खोपका उत्पादक होइनौँ । तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौँ । मोटामोटी रूपमा, ठूलो मात्रामा, मूलतः सन् २०२१ भित्र हामीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने छौँ । केही बाँकी रहला त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउने छौँ ।हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या २६ लाख ११ हजार ८०७ पुगेको छ । दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने नौ लाख ३२ हजार ८६८ पुगेको छ । खरिद गरिएको ५० लाख मात्रा र अनुदानमा ८१ लाख मात्रा गरेर एक करोड ३१ लाख मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै सबै नेपालीले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाइँ सञ्चालन गरिएको छ ।मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, हामीले भारतबाट अनुदानमा ११ लाख डोज प्राप्त ग¥यौँ र थप दस लाख खरिद ग¥यौँ । चीनबाट चालीस लाख डोज हामीले खरिद गरेका छौँ । जसमध्ये आठ लाख आइसकेको छ र अरू बाँकी ३२ लाख क्रमशः आउँदै जान्छ । खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौँ र खोप आउँदै पनि जान्छ । अमेरिकाबाट उपहारस्वरूप हामीले हिजो मात्रै १५ लाख चानचुन मात्रा खोप प्राप्त गरेका छौँ । चीनबाट प्राप्त अनुदान १८ लाख डोज आइसकेको छ भने १६ लाख डोज नयाँ अनुदान दिने घोषणा भएको छ । जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ, अस्ट्राजेनिका करिब १६ लाख मात्रा खोप आउने भएको छ । भारतबाट आएर एक डोज लगाएर बाँकी रहेको जनसङ्ख्या थियो, त्यसलाई पनि अब डबल डोज दिन सकिन्छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत तीन लाख ४८ हजार आएको छ र तीन लाख ५० हजार आउँदै छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ६० लाख डोज क्रमशः प्राप्त हुनेछ । जोनसनको ५० लाख, मोडर्नाको ५० लाख, फाइजरको ४० लाख, कोभिसिल्ड २० लाख गरी एक करोड ५० लाख डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ, हुँदैछ । बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको ६० लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अर्थात् अब हामीलाई खोपको अभाव छैन । हुन त मलाई थाहा छ, भरे बेलुका वा भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो, हामीले खोप दिन थाल्यौँ भनेर प्रचार तमासा सुरु हुनेछ । मलाई प्रचारको प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन । मैले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने हो । देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गरेको छु । खोपको सन्दर्भमा मैले अरू धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,१०. तपाईंहरूको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै साढे तीन वर्षको अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महìवका कामहरू सम्पन्न गरिएका छन् । कतिपय महìवपूर्ण काम आरम्भ गरिएका छन् । ११. राजनीतिलाई केवल सुविधाको भागबण्डा, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रूपमा बुझ्ने÷बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा यसलाई मुलुुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन । यसो गर्न खोज्दा मैले पटक–पटक आफ्नैभित्र र बाहिरबाट सिर्जित अवरोध, घेराबन्दी र षडयन्त्रको सामना गर्नु प¥यो । ती सबैको सामना गर्र्दै हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला खडा गरेका छन् ।१२. यस अवधिमा नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि पचासौँ कानुनको निर्माण र सयौँ परिमार्जन गरिएका छन् ।१३. झण्डै शून्यबाट सुरु गरेर सङ्घीयतालाई संस्थागत सुदृढीकरण गरिएको छ । आवश्यक कानुनको निर्माण, कर्मचारीको विन्यास, वित्तीय हस्तान्तरण, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र अन्य आधारहरू तयार गरेर तीनै तहका ७६१ वटै सरकारलाई पूर्णरूपमा सक्रिय र कामकाजी बनाइएको छ । संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रस्थानमा स्थापित भएको छ ।१४. पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको समूह उक्त बाटो छाडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ । हिंसाको बाटो हिँडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ । मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ । संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन् । अर्थात् यस बीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक समस्या वास्तविक समस्या समाधान गरिएको छ । मैले माथि नै भने पृथकतावादसम्बन्धी हिंसा, संविधानको सर्वस्वीकार्यता जुन राजनीतिक समस्या थिए, ती समस्या समाधान गरिएको छ ।१५. नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी विषयमा मैले पटक पटकको सम्बोधनमार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु । फेरि मैले दो¥याइरहन परेन अघिल्ला सम्बोधनभन्दा यता थुप्रै काम भएका छन् । नयाँ नयाँ काम भएका छन् । जसमध्ये हामीले थुप्रै काम पूरा गरेर उद्घाटन नै गरेका छौँ । त्यसमा सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा अपर तामाकोसीलाई लिन सकिन्छ ४५६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना शुभारम्भ भएको छ र तत्सम्बन्धमा खिम्तीको सवस्टेसन जो ढल्केबरभन्दा अर्को दोस्रो सबस्टेसन हो । त्यो तयार भएको छ । अर्को महìवपूर्ण कुरा कर्णालीकाम पाँच वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत् पुगेको थिएन । अहिले हामीले कर्णालीमा विद्युत् पु¥याएका छौँ । अब कालिकोटमा विद्युत् पुगेको छ र त्यसैगरेर जुम्लामा पनि विद्युत् पुगेको छ । यो तीन वर्षमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन पु¥याउन सक्यौँ कर्णालीमा र अब केही समयभित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदै छ । यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौँ । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !यसबीचमा हाम्रो देश बाढी पहिरोबाट नराम्ररी आक्रान्त भएको छ । धेरैले जीवन गुमाउनु परेको छ । यतिबेला म कोभिड–१९ बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । घाइते हुनुहुन्छ, जो उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ । परीक्षण, उपचार सबै व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ । अब पनि त्यो कुरालाई जारी राख्नेछ । बाढी पहिरोका सम्बन्धमा हामीले तत्काल उद्धारका कामहरू, हेलिकप्टर, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसदहरू लगायतका जनप्रतिनिधि र विभिन्न समाजसेवी परोपरकारी सङ्घसंस्था समेतको अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागितामा हामीले बाढीपहिरो जस्ता कुराको आपत् परेका ठाउँमा उद्धार कार्य पु¥याएका छौँ । राहत वितरणका काम पनि भएका छन् । पछिल्लो समयमा अस्ति २६ गते म मेलम्ची आफैँ हेर्न गएको थिएँ । मैले त्यहाँ हालका लागि उहाँहरूले एक हजार बन्डल जस्तापाताको माग गर्नुभएको थियो अस्थायी प्रबन्धका लागि । मैले पुग्दोगरी तपाईंहरू प्रयोग गर्नुस् जस्तापाता भनेर १५ सय बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु । अस्थायी प्रबन्धका लागि ५० हजार रुपियाँ हरेक परिवारलाई उपलब्ध गराउने । यसपछि हिमाली भेगमा पाँच लाख, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख र तराईमा तीन लाखका दरले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषित नीति नै रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । हामी पुनः निर्माणका काममा लागेका छौँ । मेलम्चीको मुहानमा समस्या परेको छ । त्यो समस्या हामी छिट्टै अन्त्य गर्ने र यसै वर्षभित्र सन् २०२१ भित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ । आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू !आजको अवस्था भनेको देश कोभिड–१९ बाट, त्यसको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको यो अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति, त्यस्तै गरेर बाढी, पहिरोजस्ता कुराबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था हो । हामीले देशलाई समय खर्च नगरीकन संवैधानिक कानुनी हिसाबले एकताबद्ध भएर एकताका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने, विकासको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर मलाई दुःख लाग्छ, यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व बढाउने, परस्परमा असमझदारी, घृणा बढाउने, त्यो असमझदारी र घृणाबाट मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् र एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको छ । म आजको आवश्यकतातिर, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतातिर, विकास निर्माणका काममा एकताको आवश्यकतातिर सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामी कुनै उन्मादमा जान आवश्यक छैन । निराश हुनु पनि आवश्यक छैन । यद्यपि हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने । ऐतिहासिक त हुने नै भयो यो, कालान्तरसम्म सम्झिइने छ । यसका असर पर्ने छन् । यसको समीक्षा देशले गर्नेछ । यसका परिणाम र परिणतीले असरहरू अभिव्यक्त गर्नेछन् । त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिकभन्दा पनि केही फरक नपर्ला । तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला ।हाम्रो आजको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने थियो । यतिबेला राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ । बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । तर मलाई शङ्का छ । जेजस्ता घटनाक्रम विकास हुँदैछन्, यसले संसद् पनि सहीसलामत अगाडि जाला ? अब बन्ने सरकार सहिसलामत ढङ्गले अगाडि बढ्ला ? शङ्का छ । विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरू छन् । मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन । परिचित पात्रहरू छन् । उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको भूमिका सबै कुरा देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ ।यस पटकको फैसलाले मेरो बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ । मैले झण्डै छ दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको छु । मैले अघि पनि भनेँ, लोकतन्त्र मेरा लागि जीविकाको विषय होइन । लोकतन्त्र मेरा लागि जीवनको विषय हो । मैले मेरो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन, एक अवधि, एक चुनाव, एक फैसला, एउटा जिम्मेवारी त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा, निश्चित दृष्टिकोण, गन्तव्यको आधारमा, देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? कस्तो देश निर्माण गर्ने हो ? आर्थिक, राजनीतिक रूपले देश कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी चल्नुपर्छ ? हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ ? त्यसका बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ । सञ्चार माध्यमहरूमा अपव्याख्या गर्न खोजियो, आज सङ्कटकाल लगाउँछ, सेना परिचालन गर्छ भनेर । मैले भन्दै रहेँ, जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि, अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हत्कण्डा प्रयोग गरेर मलाई अगाडि जान मञ्जुर छैन । किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र मैले झण्डै झण्डै थाहा पाएदेखि १४ वर्षको उमेरदेखि लडाइँ गरेर आएँ–लोकतन्त्रका लागि । आज संवैधानिक नैतिकताका कुरा ममाथि उठाइयो । संवैधानिक नैतिकताको कुराको मापदण्ड कुन चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि उठेको हो ? मलाई थाहा छैन । तर संवैधानिक नैतिकता मेरा लागि ? जसले जेलनेल खटेको छ, यातना सहेको छ, जीवन जोखिममा राखेर सङ्घर्ष गरेको छ, आधा शताब्दीभन्दा अलिक बढी नै समय । म फेरि पनि भन्छु, मेरो मनमस्तिष्कमा देश, जनता, देशको सुरक्षा, देशको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताबाहेक अरू छैन । मेरो मनमस्तिष्कमा देशको विकास, देशमा सुशासन, एउटा सभ्य समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्धि, जसबाट अधिकार सम्पन्न जनताले अवसरसम्म पुग्न पाएर निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, सम्मानजनक ढङ्गले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने अधिकार राखून् । त्यो स्थिति निर्माण गर्न सकियोस् । नेपाललाई सुखी नेपालीको देश बनाउन सकियोस् । सुन्दर, समृद्ध, सुशासनयुक्त, सुसभ्य देश होस् र सुखी नेपाली जनता होऊन् । यसका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ । त्यस्तो प्रणाली चलाउन लोकतान्त्रिक संविधान र कानुन चाहिन्छ ।
त्यसलाई सञ्चालन गर्न, त्यो संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने इमानदार अठोट चाहिन्छ भन्ने रह्यो । त्योबाहेक मेरो मनमस्तिष्कमा केही पनि रहेन । मैले आफ्नो स्वार्थलाई महìव दिनुपर्ने कहिल्यै परिस्थिति पनि बनेन र म दिँदा पनि दिन्नँ ।म देशवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा भन्न चाहन्छु, जनताको बीचमा जाने दिन आओस् । त्यतिबेला यी कुराहरूको फैसला जनताले दिनेछन् । आज म आदेश, परमादेशबाट सरकारबाट हटेको छु । तर मेरो देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, जेलमा बस्दा पनि निष्ठाका साथ बसेको थिएँ, यत्तिकै आशावादिताका साथ बसेको थिएँ । जतिबेला निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जतिबेला पञ्चायती तानाशाही निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्था थियो त्यतिबेला नेल, हत्कडी लगाएर, चिसो सिँढीमा राखिँदा पनि मेरो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, देश र जनताप्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन । आज पनि हुँदैन । म फेरि आफ्नो कर्तव्यमा देश र जनतालाई शिरमा राखेर कर्तव्य पालनाको आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेने छु । यो कुरा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु ।नेकपा एमालेको सरकार ढलाइयो । यो सरकार किन ढलाइयो भने यस सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढताका साथ काम ग¥यो । विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो । सुशासनका निम्ति अथक प्रयास ग¥यो । जनतालाई राहात सुविधा पु¥याउने कुरामा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा, ज्येष्ठ नागरिकदेखि, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पछाडि परेको समुदाय तिनीहरूको बारेमा चिन्ता ग¥यो । उनीहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्ता ग¥यो यो सरकारले । यो दिशामा थुप्रै काम ग¥यो । अरू त कुनै कारण छैन यो सरकार हटाउनुपर्ने । कुनै राजनीतिक दल छट्पटाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन । जनताका बीचमा जाउँभन्दा नजाने, जान आँट नगर्ने । जनता भनेको सुन्ने बित्तिकै, निर्वाचन भनेको सुन्नेबित्तिकै थरर हुने । अनि अदालत गएर मुद्दा लडेर करेसाबारीको झगडा हो यो ? गजबसँग प्रधानमन्त्री । विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो । प्रधानमन्त्री हटाइयो । यहीँ विश्व न्यायप्रणालीका रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने बिडम्बना भन्नु पर्ला । मैले अघि नै भनेँ, यो इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ । हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छौँ । सरकार ढाल्न त बाहिरबाट कोसिस भए–भए । षड्यन्त्र कहाँँकहाँबाट भए, म त्यता जान चाहन्नँ । षड्यन्त्र भए । षड्यन्त्रले विभिन्न अपवित्र गठबन्धनहरू जन्मायो । नेकपा एमाले पार्टी फुट्यो÷फुटाइयो । कुनै कारण छैन सरकार राम्ररी काम गरिराखेको थियो, पार्टी चलिराखेको थियो । केही मान्छेहरूको कहिले तृप्त नहुने महìवाकाङ्क्षा, ईष्र्या जस्ता कुराहरूले पार्टीभित्र भयङ्कर अस्वस्थता पैदा भयो । म निर्वाचित अध्यक्षलाई थाहा नदिईकन पार्टीबाट हटाउनेसम्मका काम भए । दलको नेताबाट हटाएर, अध्यक्षबाट हटाएर मै अध्यक्ष भएँ भनेर पगरी लगाउने काम भए । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो, त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका २६ जनाले अनुशासनहीन, अराजक ढङ्गले आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतीपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका काम भए । पार्टीमा अन्तरघात गर्ने, विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो पक्षमा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधी खुट्टामा पास दिन्छ । आपूm गोल रक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गर्दिन्छ । पोस्टमा कोही बस्न खोज्यो भने त्यसलाई लखेट्दिन्छ । यो खालको स्थिति हामीले देख्यौँ । यस प्रकारका अनुशासनहीन, अराजक काम, पार्टी विरोधी गतिविधि र एक ढङ्गले भन्ने हो भने यसले अन्ततोगत्वा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका विरुद्धमा गयो । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ । राष्ट्रमा एउटा उत्साह आएको थियो । विकास हुन सक्ने रहेछ, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ । हामीले देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गरायौँ । हामीले तुइनहरू विस्थापन ग¥यौँ ।
धेरै मात्रामा बाटाहरू बनायौँ । हाइवेहरू बनायौँ । सडक पुलहरू बनायौँ । स्कुलहरू बनायौँ, कलेजहरू बनायौँ, पुनः निर्माणका विशाल कामहरू ग¥यौँ र यो सबै देख्दाखेरी विकास हुन सक्दो रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा पलायो । त्यस विश्वास, त्यसबाट आत्तिएकै तìवहरूले यो सरकार लोकप्रिय हुन थाल्यो, विकास गर्न थाल्यो भनेर यसका विरुद्ध विषवमन गर्ने, अफवाह फैलाउने, झुटा कुरा प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलाप मच्चाइरहे । जसले गर्दाखेरी आज जनतामा अलिकति केही अन्योल, भ्रम पार्ने कोसिस भएको छ । म भन्न चाहन्छु, हामी जनतालाई अन्योलमा पर्न, भ्रममा पर्न दिँदैनौँ । कुनै पनि हिसाबले यस देशको सार्वभौमसत्ता, यस देशको स्वाधीनता, यस देशको भौगोलिक अखण्डता, यस देशको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासहितको लोकतन्त्र, सजीव अभ्याससहितको लोकतन्त्र यसमा हामी पछाडि पर्न दिँदैनौँ । हामीले थालेका विकास प्रयासका अभियानलाई किञ्चित हामी अलपत्र पर्न दिँदैनौँ । हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि खबरदारी गरिरहन्छौँ । तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भएदेखि डेढ वर्ष होला । त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ त छैन होला । फेरि जनताका बीचमा जानुपर्ने होला । हाम्रो रोडम्याप हामी फेरि पनि देशप्रति जिम्मेवार छौँ । लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छौँ । मैले सुरुमै भनँे हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हुँदा एकाध फैसलाबाट हामी विचलित हुँदैनौँ । यसलाई कुनै हिसाबले तलमाथि कहीँ परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने ठान्छु ।अदालतको फैसला अनुचित छ । हाम्राविरुद्ध छ । संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन र जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।म पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, धैर्यता, संयम गुमाउने होइन, आत्मविश्वास कम हुन दिने होइन । हामी देश र जनताप्रति समर्पित शक्ति हौँ । देश र जनताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको सजीव रक्षा, सजीव कार्यान्वयन र त्यसको समयानुकूल विकास गर्दै जाने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेका छौँ । त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ । त्यसकारण म पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि भन्न चाहन्छु, युवापुस्तालाई भन्न चाहन्छु, यो देश युवाप्ुस्ताको हो, यो देश आगामी पुस्ताको हो । यो देश भोलिको पुस्ताको हो । त्यसकारण भोलि हाम्रा सन्ततीले हामीले जस्तै कठोर सङ्घर्ष गर्न नपरोस् । यसका निम्ति हामीले एउटा मजबुत आधार छोडेर जाऔँ । एउटा सुन्दर विकसित समाज निर्माण गरेर जाऔँ । त्यसका निम्ति हामी सबै हरेस खाएर होइन, उच्च मनोबल राखेर अगाडि बढौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु । हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विभिन्न ढङ्गले अनेक प्रकारका हाम्रा विविधतालाई अनेक शक्तिले उछाल्न सक्छन् । विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो, सम्पदा हो । तर हामीले त्यस कुरालाई वैमनस्यता, लडाइँ, झगडाको विषय बनाउनुहुँदैन । त्यो समृद्धिलाई हामीले सम्पदाका रूपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध बनाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ । एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्दछ । हामीले एकताबद्ध राष्ट्र, सुदृढ राष्ट्र त्यसका निम्ति योगदान गरौँ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न म फेरि एक पटक सबैमा हार्दिक आग्रह, अनुरोध गर्न चाहन्छु । १६. अन्त्यमा, यस अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग र उत्साह प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
मैले नेतृत्व गरेको, मेरो नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल सरकार हो । धेरैको योगदान छ । तपाईंहरूको सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको हो । हामीलाई अहिले पनि ऊर्जा दिइरहेको छ । आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशभित्र, देशबाहिर रहेका सबै, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा अग्रमोर्चामा खटिएका डक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । हाम्रो विकास प्रयासमा निरन्तर साथ सहयोग दिने मित्र राष्ट्रहरू र त्यहाँका राष्ट्र«÷सरकार प्रमुखहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अहिले भर्खर मात्र मैले कोभिड–१९ सम्बन्धमा, त्यसको विरुद्धमा खोपको कुरा गरेँ । यदि मित्रराष्ट्रहरूको साथ सहयोग हुँदैनथ्यो भने, उहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको साथ सहयोग हुँदैन्थ्यो भने यो सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ । त्यसकारण म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।१७. लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि हामी चौबीसै घण्टा सजग भएर खडा हुनेछौँ । थालिएका अग्रगामी कदमहरूको निरन्तरताका लागि खबरदारी गरिरहने छौँ । मुलुकलाई अस्थिरतातिर, अर्थतन्त्रलाई ओरालो दिशातिर, जनतालाई अन्धकारतिर र संविधानलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध हामी चट्टान बनेर उभिने छौँ ।१८. मेरो पूर्ण विश्वास छ, मुलुकले सुरु गरेको अग्रगतितिरको यात्रा कसैले पनि बिथोल्न सक्ने छैन र हामी त्यो बिथोल्न दिने पनि छैनौँ । बादलले एक छिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन । नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैँभरि अग्रमोर्चामा डटिरहने छ । एकछिन बादल लागेको छ । फेरि सूर्य बादल फटाएर उदाउने छ ।
सबैमा धेरैधेरै धन्यवाद !(सम्बोधनको सम्पादित पूर्ण)